Video | U.N.O.B
စာပေဟောပြောပွဲညမှ ဒေါ်မာမာအေး၏ မဟာဂီတ အမှတ်တရ ဟောပြောမှု ဗွီဒီယို အပြည့်အစုံ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ Flash Player ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Web Site ပေါ်တွင် ဗွီဒီယို ကြည့်ရန် အခက်အခဲ ရှိပါက မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ Full length video of Daw Mar Mar Aye’s speech “Mahar Gita”. Get the Flash Player to see the wordTube Media Player. Read More...
Composed and Performed by The Great Legendary Jimmy Jack ( Lashio Thein Aung ) ﻿ Read More...
မေလ (၁)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သော အန်ကယ်ဦးမျိုးညွန့်နှင့် အန်တီဒေါ်ရီရီ တို့၏ နှစ်၅၀မြောက်ရွှေရတု မင်္ဂလာပွဲတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသော ဗွီဒီယိုဖြစ်ပါသည်။ မိတ်ဆွေများစုံစုံညီညီ ပျော်ပျော်ပါးပါး တက်ရောက်ခဲ့ကြသော ပွဲဖြစ်သောကြောင့် ရပ်ဝေးရပ်နီးမှ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများအားလုံး အမှတ်တရအနေဖြင့် ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဤနေရာတွင် ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Read More...
Lazy Club Concert Video
Events, UNOB, Video
Here are the great concert videos. The most enjoyable night in Florida and we are proud to represent all of these videos in here. Click here to watch videos. (more…) Read More...
Conference and Interview
Comments Off on Conference and Interview
**Windows Media Format Collection of Videos Date Description Video Length Play June 27 2009 Conference at Tempa Approximate 50 Min May 27 2009 Formal 1st Meeting Appro.5Minutes July 12 2009 Interview (Dr.Pe Than Maung, Dr. Lwin, Dr. Kyin Ho) Approximate 63 Min Read More...
Chit Kaung – ချစ်ဖူးတယ် Thazin – သဇင် R.Zarni – စည်းတစ်ဖက်ခြား ဇော်ပိုင် – ပျိုပျိုမေ here is the band’s action, hope you like it. Lazy Club rocks the night!!! အချင်းချင်းဆွေးနွေးရန်၊ အကြံဥာဏ်များပေးရန်အတွက် Comment Section ကိုထားရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန် လေးစားခြင်းအားဖြင့် အပြုသဘောဆောင်သော Comment များကိုသာရေးသားကြပါရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ ယခု Website တွင်လာရောက်လည်ပတ်လျက်ရှိနေသော လူကြီးမင်းသည် စာရေးတတ်၊ ဖတ်တတ်သည့် အသက်အရွယ်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါသောကြောင့် မိမိရေးသော Comment များသည် မိမိတာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ ဤ Website (unobusa.org) ဖြင့် လုံးဝ မသက်ဆိုင်ပါကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးလိုပါသည်။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် unobusa.org Read More...
It’s nice to be able to say we are so proud of what we have done because we, UNOB, successfully has held an interview with.. [read more..] Watch Interview Video Image Slideshow Read More...